Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Shukulaatada Vegan cusub ee dareenka leh
Sida jowharadaha qaaliga ah ee ku jira sanduuqa dahabka, Nhiär ganache ganache pralines ee quruxda badan waxay ku dhex dhalaalaysaa sanduuqyadooda quruxda badan. Waxaa lagu sameeyay taxadar aad u weyn oo si jacayl leh loo sameeyay, nacnacyada shukulaatada waxay ku saleysan yihiin maaddooyin tayo sare leh.
Kookaha dabiiciga ah ee laga beeray jiirada cagaarka ah ee Andes ee Peru, oo lagu macaaneeyey macaaneeye ka yimid miraha raaniga. Caanaha dhirta ku salaysan ee laga helo qumbaha ama miraha oo lagu daray digirta kookaha ee hodanka ah si ay u noqdaan kuwo jilicsan oo jilicsan. Ma jiro caano xayawaan ah, ma jiro sonkor la safeeyey, ma jiro milix faragelinaya vegan, raaxaysi miyir leh. Shakhsi ahaan loo qaabeeyey oo qayb ahaan lagu qurxiyey midabyo sakhraan ah oo asal dabiici ah.
Sarah Anyieth waxay dhaxashay cunto karinta qoyska qadiimka ah oo leh sixirka dareenka leh ee ku dhawaad ​​​​caadooyinkii iyo caadooyinka la ilaaway. Cunto karintu isma beddelin ilaa ay Sarah qaaday tillaabo geesinnimo leh oo horay loo qaaday oo dib u fasirtay habka shukulaatada ee jiilalku jecel yihiin.
"Way adag tahay in la helo shukulaatada aan lahayn emulsifiers, xasiliyayaal, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, iyo sonkorta la safeeyey. Nhiär, waxaan hadda ku siinnaa shukulaatada macaan ee vegan, qaabka dhirta ku salaysan. Waxaan bixinaa daweyn shukulaato ah oo loogu talagalay dadka miyir-qabka leh ee doonaya inay naftooda u abaal-gudaan had iyo jeer, ayay tidhi. Sarah waxay ku faantaa inay adeegsato walxo dabiici ah, tayo sare leh, dabiici ah, iyo anshax ahaan. Alaabooyinku waxay ka yimaaddaan beeralayda joogtada ah ee Fair-Trade soo saarayaasha dabiiciga ah.
Dareenkan saafiga ah ee qaabka shukulaatada ayaa sidoo kale dhiirigeliya dadka wax yaqaan ee ka baxsan bulshada vegan. Xittaa dhaqammada shukulaatada adag waxay ammaanaan fanka macaan waxayna ku ammaanaan shukulaatada Nhiär baraha bulshada.
Badeecada Nhiär si ula kac ah ayaa loo ilaaliyaa. Sarah waxay u dhoofisaa alaabteeda gacanta lagu sameeyo ee khubarada vegan ee Maraykanka, sanduuqyo yaryar oo afar shukulaato ah ama sanduuqyo waaweyn oo ah 24 bonbons - hadiyadda ugu fiican ee saacadaha jacaylka ee laba ama martiqaad fiidkii casho quruxsan.